Mutsva wakabuda mufananidzo weinofungidzirwa iPhone 7, ino nguva iri goridhe | IPhone nhau
Mufananidzo mutsva wakaburitswa weinofungidzirwa iPhone 7, ino nguva iri mugoridhe
Zvinotaridza kuti kuyerera kwe kuvuza uye kunofungidzirwa mifananidzo yeiyo iPhone 7. Zvirokwazvo, aya mapikicha anowanzove neushoma kana kusavimbika chaiko, kunyanya kana isu tiri kure kwazvo kubva kuvhurwa kweiyo iPhone 7, inofungidzirwa munaGunyana, segore rega. Nekudaro, zvinoita sekunge ivo vese vanofamba munzira imwechete, zvese zvinongedzera ku iPhone 7 Ichave iine dhizaini yakanyanyisa kufanana neiyo yazvino iPhone 6, uye kuti vanozopedzisira vabvisa mitsara yepurasitiki iyo inoshanda yekufukidza pazasi nepamusoro, kudzideredza mumutsara mumwechete kumucheto.
Nekudaro, hunhu hwekudonha uku hunoratidza kuti zvese zvinopenya haisi goridhe (pun yakanangwa, kana uchiona ichi chigadzirwa chegoridhe), nekuti pachiitiko ichi, sezvazvinowanzoita, mhando yemufananidzo haukoshese, uchititadzisa kukoshesa chokwadi mashoko. Chakanga chiri chinhu chataigona kunzwisisa makore apfuura, asi nhasi chero chero nhare mbozha kamera inogona kuwana mhedzisiro pane aya atinowana mune dzino nhevedzano yemifananidzo isingamire kuuya kumambure vhiki nevhiki. Mune ino kesi, isu hatina kugutsikana nekusakwana kuri kumusoro uye kuzasi, pamwe nenyaya yekuti kamera haina kutenderera zvakakwana.
Nekudaro, isu tatoziva kuti idzi mhando dzekudonha dzinowanzo shandisa izvo zvekupedzisira dhizaini, sezvazvichazoitika neiyo iPhone 5 uye iPhone 6, dhizaini yacho yaidarika yakatsengwa mwedzi yapfuura, rudzi urwu rwekuvuza, kunyange asiri iwo yakajeka, iri kuwedzera kukosha, Apple haichaziva machengeterwo ayo zvakavanzika kwazvo. Ungade here kuti Apple yakatangisa iyo iPhone 7 yakafanana nemhando yayo yapfuura? Zvirokwazvo kwete, ini ndinopedzisira ndagutsikana kuti Apple inovandudza zvishoma zvishoma mukugadzirwa, kunyangwe iine zvinopesana, senge iyo iPhone SE kesi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone Concepts » Mufananidzo mutsva wakaburitswa weinofungidzirwa iPhone 7, ino nguva iri mugoridhe
Rafael Pazos✌ akadaro
Ndiri kumirira girazi iPhone 8 kuti ibude, nekuti zvinoita sezvisina musoro kuti vaburitse aluminium iPhone 7 ... iro rinotevera gore rinenge riri iro (?) Ini ndinokahadzika ..
Pindura kuna Rafael Pazos✌
Lorenzo Marulanda akadaro
Miguel, chii icho chavasinganditendere kuisa ino positi paFacebook? Ini ndinoteedzera iwo mavara ini andinowana mune inogumbura popup:
Iwe haugone kutumira izvi nekuti zvine chakavharirwa chinongedzo
Zvemukati zvauri kuyedza kugovana zvinosanganisira chinongedzo icho masystem edu ekuchengetedza anotora sekusachengeteka
Ndokumbirawo ubvise iyi link kuti uenderere mberi.
Kana iwe uchifunga kuti uku kukanganisa, ndokumbira utizivise.
Pindura kuna Lorenzo Marulanda
Apple inotangisa yekupedzisira vhezheni yeIOS 9.3.2 isina nhau huru
Samsung patents smartwatch iyo inoshandura ruoko rwedu kupinda muchiratidziri